mai | 2021 | InfoKmada
Distrikan’Antsirabe II : manomboka ny fanamboaran-dalana
InfoKmada - 25 mai 2021 0
Natomboka ny fanamboaran-dalana ao amin’ny distrikan’Antsirabe faharoa .Lalana mirefy 54 km manomboka ao Vatofotsy Antsirabe mihazo ny lalan’Ambano ary mipaka any amin’ny toby lehibe farihimena mivoaka any betafo.
Midongy Atsimo : miaramila 02 sy olona 17 no namoy ny ainy
Miova hatrany ny toe-draharaha ao Midongy Atsimo ankehitriny. Raha ny vaovao voaray farany, Miaramila 02 sy olona 17 no namoy ny ainy ary mitohy hatrany ny fanenjehana ireo Dahalo miisa 150 mirongo Basy sy fitaoam-piadiana mahery vaika. Trano miisa 300 no may, nandalovan’ireo Dahalo ireo.
Alatsinainy pentekosta : tany an-tokantrano no niaraka ny fianakaviana
Saika tany an-tokantrano niaraka tamin’ny fianakaviana no safidin’ny ankamaroan’ny olona tamin’ity alatsinain’ny pentkosta ity. Nisy saingy vitsy olona tsy tahaka ny isan-taona ny teny By Pass sy Analakely.
Vaksiny Covid-19 : nahazo ny anjarany ihany koa ny Faritra SAVA
Vita ny fanaovam-baksiny ireo olona tokony hisitraka izany amin’izao andiany voalohany izao tao amin’ny Faritra Sava. Mihena ihany koa ny tranga vaovao ary tsy misy afa-tsy 10 sisa no manaraka fitsaboana araka ny tatitra navoakan’ny CRCO. Na eo aza izany, tapaka fa hamafisina ny fanaraha-maso amin’ireo vavahady fidirana amin’ny faritra.
Air Madagascar : mpiasa maro no ahiana ho alefa chômage technique
Mpiasa an-jatony indray no ahiana ho tratra ny Chômage technique eo anivon’ny Orinasa Air Madagascar. Izay no nivoitra taorian’ny fvorian’ireo talen’ny orinasa sy ny solontenan’ny mpiasa. Raha toa ka tsy mbola misy ny fanapahan-kevitra ofisialy mikasika izay, nanamafy ny tomponandraikitra fa mandalo fahasahiranana tanteraka ny kaompania amin’izao fotoana izao.